Shell Using Tutorial | Shwekoyantaw
ဘာတင်ရင် ကောင်းမလဲ စဉ်းစားရင်းနဲ့ အရင် MHF က post တွေ ပြန်သွားမွေကြည့်တော့ ဆြာ hacker625 နဲ့ ဆြာl33t Bomber ဆွေးနွေးထားတာကို ပြန်ပေါင်းစပ်ပြီး post တစ်ခုအဖြစ်ပြန်တင်လိုက်ပါတယ် ...
credit to hacker625 & l33t Bomber
Deface အုပ်တတ်ချင်တယ် ... Deface ဘယ်လိုအုပ်ရလဲ ဆိုပြီး လာလာမေးတာတွေ ကြုံဖူးပါတယ် ... Fully Deface အုပ်တယ်ဆိုတာ site ပေါ်ကို shell ရောက်မှ အုပ်လို့ရတာပါ ... တချို့ shell link ကြီး ခွထိုင်ထားတာ တောင်မှ deface ဘယ်လိုအုပ်ရမှာလဲ ဆိုပြီးမေးတာက ရှိပါသေးတယ် ...
shell တင်တာကို အသာထားဦး.. အခုက shell ရောက်ပြီးတဲ့ အပိုင်းကနေ စပြောပါမယ် ....
shell ဆိုတာ ဘာလဲ ?
ဒီမှာ l33t Bomber ရဲ့ ဆွေးနွေးချက်ကို ထည့်လိုက်ပါတယ် ... ဟီးး
"shell ဆိုတာ ဟက်ကာတွေအတွက်လက်နက်/စက်ရုပ်ပေါ့
site တစ်ခု ကို အိမ်တစ်ခုလို့သဘောထားကြည့်ပါစို့
ကိုယ်က အိမ်ထဲဝင်သွားတယ် remote စက်ရုပ်တစ်ခု သွားထားနိုင်တယ်ဆိုပါစို့
ဒါဆို အဲစက်ရုပ်နဲ့ အိမ်ထဲမှာရှိတဲ့ဟာမှန်သမျှ စိတ်ကြိုက်လုပ်နိုင်ပြီပေါ့ "
ဥပမာ shell ကို ဒီမှာ ကြည့်ပါ ...
browse button ကနေ မိမိတို့ deface / another shell စသဖြင့် upload တင်ချင်တာကို တင်နိူင်ပါပြီဗျာ ... ဖျက်ချင်တာကို select မှတ်ပြီးတော့လည်း ဖျက်နိူင်ပါပြီ ... index ကို ကိုင်ချင်တယ် ဆိုရင်လည်း မူရင်း index.html/index.php ကို source code edit လုပ်ခြင်းဖြစ်သော်လည်းကောင်း၊ မူရင်း index file ကိုဖျက်ပြီး ကိုယ့် index ကို ပြန် upload တင်ခြင်းဖြစ်သော်လည်းကောင်း fully deface အုပ်နိူင်ပါတယ် ... shell ဆိုတာကို တစ်မျိုး နှစ်မျိုးပဲ မမှတ်ပါနဲ့ ... php type / asp type နှစ်မျိုးအပြင် Name အမျိုးမျိုး Version အမျိုးမျိုး ရှိပါသေးတယ် ဗျာ ... ခု ကျွန်တော် တင်ပြထားတာက c100 shell ပါ ... တစ်ယောက်ယောက်က shell replace လုပ်မသွားသေးသရွေ့တော့ ကြည့်ရှုလေ့လာနိူင်ပါတယ် ...
ဒီမှာ ကျွန်တော် upload directory ထဲက index.html လေးကို ကျွန်တော့် deface source code နဲ့လဲပြီး save လိုက်ပါတယ် ... ဒါ site.com/upload ကို fully deface တာပါပဲ ... ဒီတော့ ကျွန်တော့် hacked link ကျွန်တော့် deface link က ဒီလိုလေးဖြစ်သွားမယ် ...
shell တင်မယ် ဆိုတာကို စဉ်းစားကြည့်ရအောင်ဗျာ ... နည်းနည်း tips သဘောလေး ပေါ့ ...
ဘယ်လိုဆိုရင် shell တင်လို့ရမလဲ ????
upload option ရှိရင် / ကိုယ့်မှာ upload လုပ်ခွင့် permission ရှိရင် shell တင်နိူင်ပါတယ် ... ဒီတော့ ဆက်စဉ်းစားကြည့်ရအောင် ... ဒီအတိုင်း ပလိန်းကြီးတော့ upload လုပ်ခွင့်ရတာ ရှားပါတယ် ... upload လုပ်ဖို့ permission ရဖို့လိုတယ် ... permission ဘယ်လိုရနိူင်မလဲ ??? ကိုယ်က admin username နဲ့ password နဲ့ သိလို့ admin access ရသွားရင် ရပြီ ပေါ့ ...
admin access လွယ်လွယ်ကူကူရနိူင်တာ ဘာရှိလဲ ???
Sql Injection ကို ညွန်းပါတယ် ဗျာ ...
ဒီမှာ တစ်ခန်းရပ်ပါတယ် ... နောက်ပိုင်းအခန်းတွေက sql injection နဲ့ ဆိုင်သွားပါပြီ ...
မှတ်ချက်။ ။Shell ဘယ်လိုသုံးရမလဲ ဆိုတာတစ်ယောက်မေးထားတုန်း.....mhu alarm ကတင်ပေးလိုက်
အဲ သူတို့ သုံးယောက်လုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်.....။